सन्दीपको आजको खेलले जित्ला प्रशंसकको मन? « Khabarhub
सन्दीपको आजको खेलले जित्ला प्रशंसकको मन?
काठमाडौं-पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) मा लाहोर कलान्दरबाट खेलिरहेका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामछाने आज (शनिबार) दोस्रो खेल क्वेटा ग्लाडियर्टसविरुद्ध खेल्ने भएका छन् ।
दुबईको सारजहा क्रिकेट मैदानमा हुन खेलमा सन्दीपको टीम लाहोरले ग्लाडियटैर्सविरुद्ध सवा ५ बजे खेल्नेछन् ।
योसँगै सन्दीपको पीएसएलमा दोस्रो खेल हुनेछ । यसअघि उनले मुल्तान सुल्तानविरुद्ध खेल्दै पीएसएलमा डेब्यु गरेका थिए । डेब्यु खेलमा सन्दीपले रनमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा ४६ रन खर्चे पनि ३ विकेट लिन सफल भएका थिए ।
पहिलो खेलमा सुल्तानविरुद्ध खेलेका सन्दीप आजको खेलमा प्लेइङ सेटमा पर्लान? भन्ने जिज्ञासा आम नेपाली क्रिकेट प्रशंसकको छ ।
लिगमा ४ खेल खेलिसकेको लाहोरले २ खेलमा जीत हासिल गरेसँगै ४ अंकसहित लिगको चौथो स्थानमा छ । यस्तै, ग्लाडियटर्सले खेलेको तीनै खेलमा जीत निकाल्दै ६ अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ ।
विश्वका ठूल्ठूला फ्रेन्चाईज लिगहरुमा आफ्नो उपस्थिती बलिायो बनाइरहेका सन्दीपले २०१८ को आईपीएलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलेका थिए । उनलाई यो वर्ष पनि दिल्ली क्यापीटल्स (दिल्ली डेयरडेभिल्सको नाम परिवर्तन गएिको) ले रिटेन गरिसकेको छ ।
यसै रिजनमा सन्दीपले अस्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित ट्वान्टी २० लिग बिग बासमा मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए ।
प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ११ : ५० बजे